I-ethylene glycol (i-ethylene glycol) ikwabizwa ngokuba yi "glycol", "1,2-ethylene glycol", efinyezwe njenge-EG. Ifomula yamachiza (CH2OH) 2 sesona silula. I-Ethylene glycol ayinambala, ayinavumba kwaye ineencindi ezimnandi, inetyhefu kwizilwanyana, kwaye idosi ebulalayo yomntu imalunga ne-1.6 g / kg. I-Ethylene glycol inokunyibilika ngamanzi kunye ne-acetone, kodwa ukunyibilika kwayo kwi-ether kuncinci. Isetyenziswa njenge-solvent, iarhente yokubambisa kunye nezinto ezingafunekiyo zepolyester eyenziweyo. Ipropathi yomzimba ...
Iimpawu Ukwakhiwa: umxube wensimbi osekwe kwisepha we-syntactant surfactant Inkangeleko: amasuntswana amhlophe okanye atyheli Ugcino lwexesha: imveliso iya kugcinwa kwindawo yokugcina umoya, eyomileyo nengonakalisiyo iminyaka emibini. Packaging: ukuphakheja okungafaniyo kweengxowa zeplastikhi kunye neebhegi zamaphepha ezilukiweyo Ubunzima bomzimba: I-25 kg / ibhegi 1. Inokunciphisa i-Mooney viscosity yekhompawundi yerabha, iphucule ukusasazeka kwekhabhoni emnyama kunye nearhente yeekhompawundi, kwaye inike ikhompawundi yerabha kunye ne ...
I-Jiaoyisan Pr-75 yeeNqaku eziSasazekayo zoSasazo
Iimpawu zoBume: Isixube esenziwe ngesepha esenziwe ngesepha somdibaniso wokusebenza. Inkangeleko: amasuntswana amhlophe / otyheli omdaka. Ukugcina ixesha elimiselweyo: Imveliso iya kugcinwa kwindawo yokugcina umoya, eyomileyo nengonakalisiyo kangangeminyaka emibini. Packaging: ukuphakheja okungafaniyo kweengxowa zeplastiki kunye neengxowa zephepha ezilukiweyo. Ubunzima bomzimba: 25 kg / ibhegi. 1.Ingayinciphisa i-Mooney viscosity yekhompawundi yerabha, iphucule ukusasazeka kwekhabhoni emnyama kunye nearhente yecomputer, kwaye inike ikhomputha yerabha nge ...
Igama: i-acrylic acid (i-ester) / i-C10-30 i-alkyacrylate i-polymer enxibelelene ne-carbomer 1382 isebenzisa i-cyclohexane kunye ne-ethyacetate njengezinyibilikisi, ezinokunika ukumiswa okufanayo kunye nokusebenza kozinzo njengeCarbomer1342. Njenge-rheologicamodifier enamanzi anyibilikayo, inentsebenzo eqinileyo yokuqina kunye nokuhanjiswa kokukhanya kwinkqubo yotywala yamanzi; Kwangelo xesha, imveliso inokunyamezelana okuhle ngetyuwa kunye nokuhambelana okuhle kunye ne-surfactant; Kufanelekile ngokukodwa kwi-gel yokubulala iintsholongwane. Amanzi Alcohogel, ...
Igama: Carbomer990 Carbopol990 Carbomer 990 Carbopol 990is a cross-linked polyacrylate polymer, polymerized in the co-solvent system of ethyl acetate kunye cyclohexane. Iyakwazi ukubonelela nge-viscosity ephezulu, ukuqina okugqwesileyo kunye nokumisa ukusebenza ngedosi ephantsi. Ukuhamba kwayo okufutshane (ukungasebenzisi-drip) iipropathi kufanelekile kwizicelo ezinje ngeegel ezicacileyo, iigels ezinotywala, iikhrimu. Xa ingathathi hlangothi ngealkali yenza amanzi aqaqambileyo okanye iigels ezinotywala kunye neekhrim. ICarbomer990 yikhr ...
Igama: I-Carbomer Carbopol Inkcazo yeCarbomer 276 yipolyacylate Polymer enqamlezileyo enesakhono sokunyibilikisa, esebenza njenge-thickener ephezulu kakhulu esebenzayo kunye nesezantsi, isisinisi kunye nearhente yokumisa. Inokonyusa ixabiso lesivuno kunye nerheology yezinto ezingamanzi, yiyo loo nto kulula ukufumana izithako ezingenakunyibilika (igranual, i-drop yeoyile) enqunyanyisiweyo kumyinge ophantsi. Isetyenziswa ngokubanzi kwizicelo ze-HI & I kunye nezo fomathi apho uzinzo lwe-oxidative kunye nokusebenza kweendleko zezona mfuno ziphambili. C ...
Igama: I-Carbomer676 I-Carbopol676 I-Carbomer 676 I-Carbopol 676 i-polymer yipolyacrylic e-polymer ye-asidi enqamlezileyo. Inempawu zokuhamba ezimfutshane kunye nokusebenza okuphezulu kwe-viscosity. Kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe kukhathalelo lwesitya esizenzekelayo, isicoci somgangatho onzima, iinkqubo zokucoca ukhathalelo lwasekhaya, izibaso zejeli kunye nezinye iinkqubo eziqhelekileyo zeshishini. Inokuzinza okuhle kwe-viscosity phambi kwe-chlorine bleach kwaye inefuthe elifanelekileyo kwiinkqubo eziphezulu ze-pH. Iimpawu kunye nezibonelelo ukuhamba okufutshane kwesakhiwo ...